Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Abantu abane babulawa, i-19 yenzakala kwisiqhwithi sase-Istanbul
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zaseTurkey zokuPhula
I-Istanbul ibisoloko isilwa nemozulu embi ukusukela ngentsasa yangoMvulo, inamajelo eendaba ezentlalo azaliswe ziividiyo ezoyikisayo zophahla olugutyungelwe ngumoya, izakhiwo ezonakeleyo, imithi ewileyo, iimoto ezibhukuqiweyo, kunye nenkunkuma ephaphazelayo.
Ngokwengxelo yeofisi yerhuluneli yase-Istanbul, isivunguvungu esinamandla sabetha isixeko saseTurkey ngoMvulo, sabulala abantu abane kwaye senzakala kanobom ubuncinane ishumi elinesithoba.
“Sithandazela inceba kaThixo kwabo bathe baphulukana nobomi babo, sithumela amazwi ovelwano kwizalamane zabo, kwaye sibanqwenelela ukuphila okukhawulezileyo abo benzakeleyo,” itshilo ingxelo.
Ummi omnye wasemzini kunye nabemi abathathu baseTurkey babulewe sisaqhwithi somoya, ngelixa abathathu kwabalishumi elinesithoba bonzakele bahlala esibhedlele bekwimeko embi, abasemagunyeni babhengeza.
Istanbul sele ilwa nemozulu embi ukususela ngentsasa yangoMvulo, amajelo eendaba ezentlalo azaliswe ziividiyo ezoyikisayo zophahla olugutyungelwe ngumoya, izakhiwo eziqhekekileyo, imithi ewileyo, iimoto ezibhukuqiweyo, kunye nenkunkuma ephaphazelayo.
I-Bosphorus strait ivaliwe kwi-traffic yaselwandle kwaye iinkonzo ze-ferry ziye zanqunyanyiswa.
Isaqhwithi sikwabangele ukurhoxiswa kweenqwelomoya ezininzi eziya e-Istanbul.
Iinqwelomoya azikwazi ukuhla Isikhululo senqwelomoya iIstanbul, kwaye zithunyelwa kwakhona e-Ankara nase-Izmir.
Iingxelo zomonakalo nazo ziye zangena zivela kwezinye iingingqi zelizwe, kunye nezilumkiso zesivunguvungu ezisasele ngoLwesibini.